नेपालमा कति आयो कोरोनाविरुद्धको खोप, कतिले लगाए ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » नेपालमा कति आयो कोरोनाविरुद्धको खोप, कतिले लगाए ?
अहिलेसम्म नेपालमा भारतबाट खरिद तथा अनदानमार्फत २१ लाख, चीनबाट अनुदानमा १८ लाख र सरकारले खरिद गरेको ४० लाख डोज मध्ये करिब १६ लाख नेपाल आइसकेको छ । बाँकी खोप आउने प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै, अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधामार्फत १५ लाख डोज जोनसन एन्ड जोनसनको जानसेन खोप उपलब्ध गराएको छ । कोभ्याक्स सुविधाबाट पाउने भनिएको करिब १ करोड खोप मध्ये अहिलेसम्म ३ लाख ४८ हजार खोप आएको छ । बाँकी खोप छिट्टै आउने बताइएको छ । यस्तै, जापानबाट १६ लाख डोज खोप आउने क्रममा छ भने चीन सरकारले नेपाललाई १६ लाख डोज अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ ।